Wasiirka amniga oo is furtay iyo taliyeyaasha booliska iyo nabad suggida Xamarweyne oo xilkii laga qaaday - Caasimada Online
Home Warar Wasiirka amniga oo is furtay iyo taliyeyaasha booliska iyo nabad suggida Xamarweyne...
Wasiirka amniga oo is furtay iyo taliyeyaasha booliska iyo nabad suggida Xamarweyne oo xilkii laga qaaday
Muqdisho (Caasimadda Online) – Wasiirka amniga Somaliya Maxamed Abuukar Isloow (Ducaalle) ayaa maanta xilkii ka qaaday Taliyeyaasha Booliska iyo Nabad Suggida Degmooyinka Xamar Jajab Iyo Xamar weyne, kadib markii maanta la soo gaba gabeeyay Baaritaanka dhacdadii Degmada Xamar weyne.
Wasiir Islow, ayaa sidoo kale sheegay inay xiran yihiin in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Dowladda, kuwaasi oo ku eedeysan dayacitaanka shaqada qaranka, maadaama meesha dilka uu ka dhacay meel ku dhaw ay ku qornaayeen ciidan, balse ay ka maqnaayeen.
Sidoo kale waxaa la soo qabtay shaqsi la tuhmaayo inuu ka dambeeyay falkii lagu dilay Xoghayihii Ururka Haweenka Qaranka iyo Wiil ay dhashay Batuule Gabale, oo Arbacadii lagu dilay Degmada Xamar weyne, waxaana shaqsigaasi iyo gaarigii uu watay ku socoto Baaris.
Wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay inuusan jiri doonin masuul Dowladeed oo xilka iska haynaya, isaga oo aanan si dhab ah u gudan waajibaadka shaqo ee saaran.
Maxamed Abuukar Ducaalle, ayaa sheegay inuu jiri doono isla xisaabtan adag, kormeer iyo dabagal ku aadan shaqooyinka ay qabtaan Saraakiisha ciidamada Booliska Somaliya.
Natiijada baaritaanka uu soo bandhigay Wasiirka Amniga ayaa noqonaya kiiskii ugu weynaa ee sida wadajir ah ay baaritaankooda uga qeyb qaataan Wasaaradda Amniga iyo Taliska Booliska.
Tallaabada maanta uu ku dhawaaay Wasiirka amniga ayaa ah mid si wayn u muujinaysa isbedelka ku aadan sida ay madaxda uga go’an tahay in meesha laga saaro Saraakiisha ciidanka ee curyaaminaya shaqada Qaranka.